02 April 2015 Volume :3 Issue :10
uDkt Kogie Naidoo uchaza ngokuguquka kwesifo sofuba osukwini lwase-NRMSM lomhlaba lwesifo sofuba.
I-Nelson R Mandela School of Medicine (NRMSM) igubhe usuku loMhlaba Lwesifo Sofuba ngokuba nenkulumo efundisayo ebithulwa yiNhloko yoHlelo loCwaningo e-Centre of the AIDS Programme of Research in South Africa (CAPRISA), uDkt Kogie Naidoo.
Inkulumo ebihlelwe ikolishi Lezifundo ZezeMpilo ngokubambisana ne-NRMSM, ibihlose ukukhombisa ukwesekwa kwalabo abacwaninga nge-TB, abaphila nayo nabanakekela abaphila nalesi sifo.
UNaidoo wabelane ngolwazi olukhona nge-TB. ‘I-TB ithathelana isuka kogulayo kuya komunye umuntu ngomoya. Ukubonakala kwayo kumuntu kusanesikhathi kubalulekile ukuze kuncishiswe isifo nokusabalala kwaso.’
Uchaze ngezindlela zokubona izimpawu zalesi sifo. ‘Sibhekene nomthwalo omkhulu we-TB ehlobene nengculazi. Kufanele siqinise imizamo yokunciphisa ukusabalala kwe-TB.’
Uthe e-KZN, ama-70% eziguli ezine-TB zibuye zibe ne-HIV. Ululeke abafundi nabasebenzi baseNyuvesi ukuba bazi izimpawu ze-TB, ugqugquzele labo abane-HIV ukuba bajwayele ukuhlolela i-TB.
UNaidoo ucacise ngokungazuzwa uma kuhlanganiswa imishanguzo ye-TB nama-ART. ‘Ama-ART ehlanganiswe nokwelashwa kwe-TB akhuphula izinga lempilo ezigulini ezinalezifo zombili.’
Umshayeli wetekisi uMnu Sibongiseni Goba owatholakala nesifo se-TB kuMbasa ngonyaka odlule uthe:’ I-TB iyelapheka futhi ngiwubufakazi balokho. Ngibonga uDkt Naidoo ne-CAPRISA njengoba ngikwazi ukuma lapha phambi kwenu ngisho ngokukhululeka ukuthi ningazibi izimpawu zalesi sifo ngoba ngacishe ngafa.’
Uthe wazishaya indiva zonke izimpawu zesifo ngoba wayengazazi ukuthi ziyini. ‘Ngaphambi kokuthi kutholakale ukuthi ngine-TB, ngancipha emzimbeni, ngaba buthakathaka futhi ngijuluka ebusuku.’
UGoba uthe waquleka ngelinye ilanga waphaphama emva kwezinsuku ezimbili eselashwa esibhedlela i-Prince Mshiyeni.
UNaidoo ungumcwaningi oyinhloko ocwaningweni lwe-CAPRISA oluhlose ukuthola izindlela ezingcono zokwelapha iziguli ezine-TB ne-HIV, ungumhloli oyinhloko ohlelweni oluhlose ukuqinisa izindlela zokunakekelwa ngokwezempilo kweziguli ezine-HIV, TB ne-DR TB futhi ungumcwaningi oyinhloko ngokubambisana ohlelweni laseThekwini oluxhaswe yi-PEPFAR neVulindlela CAPRISA AIDS Treatment Programme.
Uyi-PI ocwaningweni lwe-CAPRISA olubhekene nokujwayeleka kokutholakala kwe-TB ezigulini ezine-HIV neTB ebese zilashelwe i-TB ngempumelelo phambilini.